စနေနေ့ ညနေခင်းမှာ မော်ရင်ဟို နဲ့ အတူရှိနေသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင် တစ်ခု . . . - SPORTS MYANMAR
စနေနေ့ ညနေခင်းမှာ မော်ရင်ဟို နဲ့ အတူရှိနေသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင် တစ်ခု . . .
နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ်တွေ ပြီးဆုံး သွားပါပြီ ။ ဥရောပ အမှတ်ပေး ပွဲတွေ ဟာ မနေ့ ညကနေ ပြန်လည် စတင် လာခဲ့ တာ ယခု ညနေခင်း မှာတော့ ပရိသတ် တွေ ကြည့်ရှုမှု အများဆုံး ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံး ပွဲစဉ်တွေ ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစား ကြတော့ မှာဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီ တစ်ပတ် ရဲ့ အစောဆုံး ပွဲ ကတော့ ၀က်စ်ဟမ်း နဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး တို့ ကစားမယ့် ပွဲ ဖြစ်ပြီး စပါးနည်းပြသစ် မော်ရင်ဟို ကြောင့် စိတ်ဝင်စား မှု တွေ အလွန် မြင့်တက် နေတဲ့ ပွဲ လည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
၀က်စ်ဟမ်း ဟာ အမှတ်ပေး ဇယား ရဲ့ အဆင့် ၁၆ နေရာ မှာ ရှိနေပြီး ရလဒ် ဆိုးတွေ ကနေ ရုန်းထွက် နိုင်ဖို့ လိုအပ် နေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ၀က်စ်ဟမ်း ဟာ စပါး ကို အနိုင် ရဖို့ ခဲယဉ်း မယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေ က ဆိုထား သလို နည်းပြသစ် မော်ရင်ဟို ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်တမ်း တစ်ခု ကလည်း စနေနေ့ ညနေခင်း ကို မော်ရင်ဟို နဲ့ အတူ ဖြတ်သန်း ချင်သူတွေ အတွက် အားတက် စရာ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒါ ကတော့ ပေါ်တူဂီသား ကြီး ဟာ အသင်း သစ် နဲ့ စတင် ကစားတဲ့ အမှတ်ပေး ပွဲ အဖွင့် ရလဒ် တွေ အလွန် ကောင်းမွန် ခဲ့တာ ပါပဲ ။ မော်ရင်ဟို ဟာ နည်းပြ ဘဝ ၁၉ နှစ် အတွင်း ကလပ် အသင်းများစွာ နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ၀င်ခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။ အသင်းသစ် နည်းပြ အဖြစ် နဲ့ စတင် ကစားခဲ့တဲ့ အမှတ်ပေးပွဲစဉ်တွေ မှာ ရှုံးပွဲ တစ်ပွဲသာ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတာ က မော်ရင်ဟို ရဲ့ မှတ်တမ်း ကောင်းတွေ ထဲက တစ်ခု လို့ ဆိုနိုင် မှာ ဖြစ် ပါတယ်
မော်ရင်ဟို ဟာ ပရို နည်းပြ ဘဝ ကို ဘင်ဖီကာ အသင်း နဲ့ စတင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး စပါး မတိုင်ခင် အထိ ကလပ် အသင်း7သင်း ကို ကိုင်တွယ် ထားခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီ အသင်း7သင်း နဲ့ စတင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့တဲ့ အမှတ်ပေး ပွဲ7ပွဲ မှာ မော်ရင်ဟို ဟာ တစ်ပွဲ သာ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့ ပွဲတွေ ကို တော့ အနိုင် သို့ သရေ ရလဒ်တွေ နဲ့ ပိတ်သိမ်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် မှာ တော့ မော်ရင်ဟို ဟာ ချဲလ်ဆီး ကို ၂ ကြိမ် ၊ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ကို ၁ ကြိမ် နည်းပြ ခဲ့ဖူး ပြီး အဖွင့် ၃ ကြိမ် စလုံး မှာ အနိုင် ရလဒ် တွေ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ရာသီ အဖွင့်မှာ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ချဲလ်ဆီး ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့ပြီး ၁ – ၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့ သလို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရာသီ အဖွင့် တုန်းက လည်း မော်ရင်ဟို ရဲ့ ချဲလ်ဆီး ဟာ ဟူးစီးတီး ကို ၂ ဂိုးပြတ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ အဖြစ် နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့် ပွဲမှာ လည်း ဘုန်းမောက် အသင်း ကို ဇလာတန် ရဲ့ ဂိုးတွေ နဲ့ အနိုင် ယူခဲ့ပြီး အင်္ဂလန် ဟာ မော်ရင်ဟို ရဲ့ အောင်မြေဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ယခု ညနေခင်း မှာ ကစားမယ့် လန်ဒန် ဒါဘီ အတွက် မော်ရင်ဟို ဘက်မှာ ရပ်တည်တာ ဟာ အခြေအနေ ကောင်းနိုင် ဖို့ အလေးသာ နေတယ် လို့ ယူဆ လို့ ရနိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံး မှာ ဘာမဆို ဖြစ်သွားတတ် တာ မို့ အရာရာ ကို ဆင်ဆင် ခြင်ခြင် လုပ်ကိုင် တာ ဟာ အသင့်တော်ဆုံး နည်းလမ်း အဖြစ် ရှိနေ မှာပါ . . . .
မော်ရင်ဟို ရဲ့ နည်းပြဘဝ အသင်းသစ် တွေ ရဲ့ အဖွင့် အမှတ်ပေး ပွဲစဉ် ရလဒ်များ –
၁ ။ ဘိုအာဗစ်စတာ ၁ – ၀ ဘင်ဖီကာ ( မော်ရင်ဟို )
၂ ။ စပို့တင်း ဘရာဂါ ၀ – ၀ ယူနီယိုဒီလီယာ ( မော်ရင်ဟို )
၃ ။ ပေါ်တို ( မော်ရင်ဟို ) ၂ – ၁ မာရီတီမို
၄ ။ ချဲလ်ဆီး ( မော်ရင်ဟို ) ၁ – ၀ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
၅ ။ ဆမ့်ဒိုးရီးယား ၁ – ၁ အင်တာ မီလန် ( မော်ရင်ဟို )
၆ ။ မာယော့ကာ ၀ – ၀ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ( မော်ရင်ဟို )
7 ။ ချဲလ်ဆီး ( မော်ရင်ဟို ) ၂ – ၀ ဟူးစီးတီး
၈ ။ ဘုန်းမောက် ၁ – ၃ မန်ယူနိုက်တက် ( မော်ရင်ဟို )
အဖွင့်ပွဲ မှတ်တမ်း ( အသင်းသစ်နှင့် ) – ၈ ပွဲ ကစား ၊ ၄ ပွဲနိုင် ၊ ၃ ပွဲ သရေ ၊ ၁ ပွဲ ရှုံး
ဒီည ရလဒ် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ . . . . .